Faahfaahinta Realme 5 Pro ayaa soo baxday | Androidsis
Qeexitaannada Realme 5 Pro ayaa soo ifbaxay oo nooga warramaya meel dhexaad dhexdhexaad ah
Waxaan dhawaan ka helaynaa Realme taleefan casri ah oo dhexdhexaad ah., shirkaddii mar ahayd Gacanta Oppo ee suuqa Hindiya, midka uusan hadda si gaar ah ugu shaqeyn. Waxaan leenahay tan dambe maxaa yeelay shirkaddu waxay caalami ahaan ku ballaarisay dalal dhowr ah, oo ay ka mid yihiin Shiinaha, goor aan fogayn.
Laakiin sifiican, adoo diirada saaraya aaladda aan u nimid inaan ka hadalno markan, taas oo ah Realme 5 ProWaxaan haynaa xog si cadaalad ah u kala duwan, waxayna la xiriiraan waxa moobilkani noo hayo, kaasoo balan qaadaya inuu tartan adag ka bixin doono qeybta loogu talagalay.
Adeegsade Sudhanshu Ambhore (@ Sudhanshu1414) ayaa noqday isha caarada taas ayaa na siisay Realme 5 Pro muraayadaha ayaa xaday iyada oo loo marayo qoraal la soo dhigay Twitter. Tani waxay ogeysiineysaa in terminalku uu adeegsan doono chipset-ka Snapdragon 712, Mid ka mid ah dhufto ee mobile cusub Qualcomm ee lagu muujiyay sida ayna yar oo ka mid ah Snapdragon 710.
48MP Sony IMX586 shidma Primary?
Bandhig AMOLED oo leh Waterdrop Notch
Sawirka faraha-sawirka faraha#dhab ahaan # realme5Pro # realme5series # Quad5quad
- Sudhanshu Ambhore (@ Sudhanshu1414) August 12, 2019
Sidoo kale, shaashadda moobiilku waxay noqon doontaa tikniyoolajiyad AMOLED ah waxayna yeelan doontaa bucshiro u eg qaab dhibic biyo ah. Tani waxay lahaan doontaa akhristaha faraha isku dhafan ee hoostiisa, sidaas darteed waxay u socotaa iyada oo aan la sheegin in dhabarka kaliya aan ka heli doonno nidaamka sawir-qaadashada afar-laablaha ah, kaas oo ka koobnaan doona 586 MP Sony IMX48 sensor weyn, xagal ballaadhan oo gaabis ah, muraayadaha indhaha iyo kicinta afraad oo aan wali wax laga ogaani jirin.
Qeybaha kale ee taleefanka, sida awooda batteriga iyo cabirka shaashada, lama xusin, laakiin warqad faahfaahsan oo buuxda waa inay muuqataa toddobaadyada soo socda. Faahfaahinta qiimaheeda iyo sida suuqa looga heli karo sidoo kale wax yar baa shaaca laga qaadi doonaa., waxaanna dheg u noqon doonnaa qabashadooda isla marka ay soo baxaanba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Qeexitaannada Realme 5 Pro ayaa soo ifbaxay oo nooga warramaya meel dhexaad dhexdhexaad ah
Cubot X20 Pro wuxuu noqon doonaa taleefan casri ah oo leh kamarad laba jibbaaran oo la yaab leh
Meitu wuxuu iskaashi la sameeyay shirkadda Huawei si loo horumariyo algorithm-ka kamaradeeda